Obi dị m ezigbo ụtọ n’ikpeazụ ịhụ ihe isiokwu nke na-ajụ usoro Jack Welch na-agbasa ozi ọma. Ekwenyere m na ọ bụ onye na-enweghị uche, onye nwere mmụọ mmụọ, ịchọ ọdịmma onwe onye na anyaukwu. Naanị ihe ọ mere bụ ime ka ndị ahịa na ndị ọrụ taa ahụhụ. Naanị ya nwere ike ịbụ onye mmeri, mana ọ bụ ọtụtụ ndị ọzọ furu efu.
M na-anya ụgbọala n'abalị a ma na-eche mgbe m rụrụ ọrụ maka Landmark Communications. Enwere m obi ụtọ dị ukwuu izute Frank Batten Sr. mgbe m na-azụ ọzụzụ ụlọ ọrụ ụfọdụ. Otu onye jụrụ Mazi Batten, "Ego ole ka ezuola?". Mazị Batten atụfughịdị na ajụjụ ahụ. Nanị ihe o kwuru bụ na ọ bụrụ na ọ bụ maka ego ahụ, ọ ga-arahụ ogologo oge gara aga. Anaghị m echeta okwu ọ bụla o kwuru, mana o kwuru na obi a hisụrị ya ugbu a bụ eziokwu ahụ bụ na nnukwu mmadụ ahụ ọ goro ọrụ na ụlọ ọrụ ha wuru were ọtụtụ puku ezinụlọ. Ihe o lekwasịrị anya bụ ịga n'ihu na-eme ka ụlọ ọrụ na-agbasawanye ma na-agbasawanye ka ụlọ ọrụ wee nwee ike ịga n'ihu na-akwado ọtụtụ.
Maazị Batten lara ezumike nká ugbu a mana echiche ya na-anọnyere m mgbe niile. Ebumnuche ya dị ukwuu nke na o chere banyere 'Mmeri' dị ka ịchụ ndị mmadụ kasị mma, iwu ụlọ kacha mma, na ịgbasa azụmahịa iji hụ na ihe ịga nke ọma maka ogologo oge. Ọtụtụ mmadụ na - 'Emeri' n'ihi ọhụụ Frank Batten. Ahapụrụ m akara ngosi 7 afọ gara aga… ma ana m aga n'ihu 'Win' n'ihi etu Maazị Batten na Landmark si mesoo m.
Nke bụ eziokwu bụ na ịnweghị ike ịkpọ ya 'mmeri' belụsọ na ndị otu gị niile so gị na-eme mmemme. Ha nyeere gị aka iru ebe ahụ ma ha kwesiri otu akụkụ, yana otu ụgwọ ọrụ. O doro anya na ị tinyela ma tinye ego na ọrụ ha - nke ahụ pụtara na ọ bụ maka ọdịmma gị ka ịchekwa ma kwanyere ha ùgwù. Ọ bụrụ na m ga-echegbu onwe m maka iwepụ pink n'ihi na ọnụahịa ngwaahịa na-amị amị, ị chere na m ga-etinye obi m n'ọrụ m? Nke ahụ bụ ihe anyị hụrụ na-eme azụmaahịa ndị udele ndị a na-ekpe n’ekpere. Ọ bụ naanị ihe a na-apụghị ịghọta.
Mmadu ole n’ime unu ma onye Jack Welsh bu? Have nụtụla banyere Frank Batten Sr.? Ọ nwere nsogbu na nke ahụ, ọ bụghị ebe ahụ?
Tags: billionaireeziokwu battenJack welchịrịba amana-emeri